Gtalk မှာ မြန်မာလိုရိုက်ရင်လေးထောင့်အကွက်လေးတွေပေါ်နေတဲ့ ပြသာနာဖြေရှင်းနည်း ~ ITmanHOME
16:15 Gmail, MM Font Keyboard Error များအတွက်, နည်းပညာ No comments
Gtalk မှာ မြန်မာလိုရိုက်ရင်လေးထောင့်အကွက်လေးတွေပေါ်နေတဲ့ ပြသာနာဖြေရှင်းနည်း
တကယ်တော့ G TALK မှာ မြန်မာလိုရိုက်ရင်လေးထောင့်အကွက်လေးတွေပေါ်က Internet explorer (IE) သွားသုံးမိလိုဖြစ်တဲ့ပြသာနာလိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုညီနေမင်းပြောတာပါ။အကိုညီနေမင်းဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ IE မှာ Zawgyi-One font ရွေးပေးဖို့ပါပဲ. အများဆုံးအဖြစ်များတာက IE နဲ့ ငြိတတ်တာများပါတယ်. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. zawgyi font နဲ့ keyboard ကိုတော့ ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ တင်ထားပေးပါတယ်. မသိတဲ့သူများ ကိုတင်ထားတဲ့ window က 32 bit လား 64 bit လား အရင်ကြည့်ပါ. 32 bit ဆိုရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ. 64 bit ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။ တစ်ချို့ ကိုတင်ထားတဲ့ window က 32 bit လား 64 bit လား မခွဲတတ်တဲ့သူများကတော့ Desktop က My computer (or) Computer ကို right click ထောက်ပြီး properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့မှာ System ဆိုတဲ့စာတမ်းအောက်မှာ system type ဆိုတာကို လိုက်ရှာလိုက်ပါ. သူ့ဘေးမှာ 32 bit ဆိုရင် 32 bit operation system လို့ရေးထားမှာဖြစ်ပြီး 64 bit ဆိုရင်တော့ 64 bit operation system လို့ရေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်
Credit - onekokoaung